Ahoana ny fampiasana fandefasana fitaovana amin'ny solosaina? & Ndash; Semalt
Ahoana ny fampiasana fandefasana fitaovana amin'ny solosaina? - Semalt
Oliver King, ny Semalt Mpitantana Success Manager, dia milaza fa ny aretina botnet dia mihamitombo eo amin'ireo solosaina manokana, indrindra any Shina sy Etazonia. Raha manana fitaovana an-jatony vitsivitsy monja ny botnets sasany, ny hafa kosa dia afaka manamboatra milina an-tapitrisany eran-tany. Botnets dia mikendry ny hisintona ireo mpampiasa mba hamoaka programa na viriosy ahiahiana ary hanery azy ireo hikiraoka rohy na video izay mety ho tratry ny aretina mampidi-doza kokoa. Avy eo dia miasa toy ny soavaly Trojan izy ary mamela ireo hackers hahazo ny data sy ny fampahalalana tsy miankina. Mampiasa ny ordinateranao manokana koa ireo hackers mba hanatanteraka asa maro samihafa ary hanao heloka bevava, hosoka, ary fanararaotana an-tserasera.
Amin'ny toe-javatra sasany, ny ordinatera na ny fitaovana finday dia mety ho tratry ny botnet na malware izay tsy mamela anao maka ny rakitra misokatra ary misakana anao tsy hanokatra tranonkala tianao indrindra. Ny botnet dia tambazotran'ny ordinatera izay voan'ny aretina malemy na ny programa ratsy. Ny rafitra dia fehezin'ny antoko fahatelo na ny antoko ivelany. Avelao aho hilaza aminareo fa ny mpampiasa botnets dia mampiasa ny ordinateranao mba hangalatra ny fampahalalam-baovao amin'ny carte de crédit, handefa mailaka amin'ny mailaka, hanao ny fanafihana an-tserasera amin'ny toerana samihafa, ary hanao fanafihana phishing amin'ny ankabeazan'ny maro..
Ahoana no hahitana ny aretina amin'ny aretina?
Raha toa ka mijery ny virosinao amin'ny antibiotika na programa manohitra malware ianao, dia tokony hajainao aloha ny aretina rehetra. Ny zava-misy dia ny ankamaroan'ny fandaharan'asa dia tsy misy dikany ary tsy afaka ny hanohy hikirakirana karazana hack sy Internet. Indraindray, ireo kodin'ny zava-dratsy dia ampidirina ao amin'ny tranokalanao raha tsy fantatrao. Raha manana ordinatera ianao dia tokony hampandrenesina ny navigateur web na ny rafitra miasa aminao. Tsara ny fametrahana fandaharan'asa fanararaotana maloto, izay omen'ny ankamaroan'ny manam-pahaizana amin'ireo mpanjifany manerantany. Raha toa ka milamina tsara ny asany ny ordinateranao dia mety ho lasibatra amin'ny botnets ianao, ary ny vintana dia ny fangalarana ny kaontinao momba ny carte de crédit.
Ahoana no hisorohana ny aretina amin'ny botnet?
Ankoatra ny fampiasana antimalware tsy tapaka sy antibiotika, dia tokony dingana maromaro ianao mba hiantohana ny fiarovana sy ny fiarovana an-tserasera. Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny fisafidianana ny anaran'ny mpampiasa sy ny tenimiafina. Ataovy azo antoka fa manara-maso ny fiainanao manokana isan'andro ianao ary manavao ireo fanovana indraindray na indroa isan-kerinandro. Tsy tokony haverinao ny tranokala rehefa mikaroka ny aterineto ianao ary mijery ireo tranonkala tianao indrindra. Mino ny manam-pahaizana fa mety hampiditra ordinatera na finday mahazatra ao anaty latsaky ny dimy minitra ny botnets. Noho izany, tokony hitandrina amin'ny pejy Internet sy ny blôgy izay tsidihinao ianao Source . Raha mampiasa ny aterineto ianao, dia tsy tokony hiditra amin'ny rohy tsy fantatra na ny mailaka tsy fantatra na oviana na oviana, fa tsy mandefa ny rindrambaiko sy ny apps amin'ny tranonkala tsy fantatra na tsy ara-dalàna, ary mijery ny fitaovana ampiasainao matetika